Faa'iidada oo hoos u dhacdaa waxay kordhisaa baahida loo qabo in kharashyada la dhimo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Tareen kuwa xaafadaha oo gelaya maxaddada Årstaberg ee koonfurta Stockholm. Sawirle: Hasse Holmberg/Scanpix.
Faa'iidada oo hoos u dhacdaa waxay kordhisaa baahida loo qabo in kharashyada la dhimo
La daabacay onsdag 22 januari 2014 kl 12.44
Shalay ayey shirkadda SJ ku dhawaaqdey in shaqooyinka laga cayrinayo dad tiradoodu gaareyso 400 oo qof iyo in la dhimo shaqaalaha qaybaha kale ee xiriirka la leh gaadiidka tareenada. Shirkadaha maamula dayactirka iyo dib-u-dhiska waddooyinka tareenada ayaa muujiyey natiijo liidata sannadkii 2013. Sidaasna waxaa soo werisey idaacadda Ekot.
Maareeyaha guud ee shirkadda Strukton Railoo lagu magacaabo Robert Röder ayaa qaba in ay wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinku ahmiyadda weyn siiso cidda ugu raqiisisan marka ay bixineyso qandaraasyada adeegyada gaadiidka tareenada.
- Waxaa Iswiidhen ka socda qiime-dhimis xooggan marka la barbardhigo dalalka kale. Taasina ma aha mid wax ku ool ah waqtiga dheer. Waan ka xumahay, laakiin waa in qiimaha sare loo qaadaa si loo helo tayo wanaagsan, ayuu yiri Robert Röder.
Strukton Rail oo uu leeyahay taajir weyn oo u dhashay dalka Holland ayaa iyada iyo shirkadda dowliga ah ee Infranord mas’uul ka yihiin boqolkiiba 90 hawlaha socodsiinta iyo dayactirka waddooyinka tareenada Iswiidhen.
In kastoo laba iyo toban sano ka soo wareegtey markii gaadiidka tareenada loo furay tartan, ayey ilaa hadda shirkado yaryari ka soo qaybgaleen. Xaalku aad ayuu ugu xun yahay shirkadda Infranord oo iyadu maamusha boqolkiiba 60 hawlaha socodsiinta iyo dayactirka waddooyinka tareenada Iswiidhen.
Shirkaddaas oo sannadkii hore si weyn u khasaartay ayaa hadda u digtey 400 oo shaqaalaheeda ka mid ah, waa in u dhiganta boqolkiiba 15 shaqaalaha shirkadda.
Shirkadda Strukton Rail ayaa dhowaan iibsatey shirkadda saddexaad ee gaadiidka tareenada BB Rail oo laga leeyahay dalka Ingiriiska, shirkaddaas oo xaalku ku xumaa intii ay Iswiidhen ka shaqeyneysey.
Shirkadda Strukton waxay u muuqataa in ay faa’iiddey sanooyinkii dambe, laakiin waxay ahayd faa’iido yar marka la barbardhigo shirkadaha kale ee qaybaha ganacsiga, ayuu yiri Robert Röder isagoo hadalkiisa sii wata.
Wuxuu Robert Röder qabaa in ay u wanaagsanaan lahayd shirkadaha iyo dadka tareenada raacaba haddii ay wakaaladda gaadiidka iyo waddooyinku wax ka beddeli lahayd habka ay qandaraasyada u bixiso.